माओवादीका कान्छा उम्मेदवारले जिते वडा अध्यक्ष, दाङ दुई वडा माओवादी पोल्टामा
दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा माओवादीका २३ वर्षीय अध्यक्ष उम्मेदवार सद्धाम सिद्दीकीले १ सय ७ मत ल्याएर जित हात पारेका छन्।
उनी दाङ्गबाट माओवादीका लागि सबै भन्दा कान्छा उम्मेदवार हुन्।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० नारायणपुरमा उनको समि टेन्ट हाउस छ। जन्मेको , पढेको पनि नारायणपुरमै कमर्स पढेको स्वर्गद्धारी वोर्डिङबाट ०६८ सालमा फष्ट डिभिजनमा उत्तिर्ण गरेको जानकारी दिए। त्यसपछि नारायणपुरकै सिद्ध रत्न उच्चमाविमा पढेका थिए।।
गढवा ८ कै सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका अब्दल हमिदा खाँ ८९ मत प्राप्त गरि विजयी भएका छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्र नारायणसिंह थापाले ९८ , महिला सदस्यमा मनमाया गुरुङ १०१ र दलित महिला सदस्यमा विमला विक १०४ विजयी भएका छन्।
गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ साविक कोइलावास गाविसमा पर्दछ। भारतसँग सीमा जोडिएको सो वडामा कुल मतदाता ४९८ रहेकोमा ३४७ मत खसेको थियो । दाङमा हालसम्म सार्वजनिक भएको नतिजा यो दुईवटा मात्रै हो । दुई उपमहानगरपालिका र एउटा नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका सबैमा अहिले मत गणना सुरु भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ९ मा पुरै प्यानल र गढुवा ८ मा एउटा सदस्य वाहेक सबै पदहरु माओवादी केन्द्रले जितेको हो।
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ९ को अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका रिमबहादुर सुनारी मगर २०० मत प्राप्त गरि निर्वाचित भएका छन् । यहाँ माओवादी प्यानलसहित विजयी भएकोछ।
मुख्य प्रतिपर्धी नेपाली काँग्रेस थियो । महिला सदस्यमा कुवाँरी देवी कार्की २०८, दलित महिला सदस्य देउकला कामी २०५ र सदस्यहरुमा अलि महम्मद मियाँ २०५, दधिबहादुर बराल २०२ विजयी भएका छन्। यस वडामा कुल मतदाता ५८३ रहेकोमा ४५७ मत खसेको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार १५, २०७४ ०१:१०:०९